Can breastfeeding make your breasts less attractive? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒါဟာ မိခငျနို့တိုကျဖို့ဝနျလေးရတဲ့အကွောငျးရငျးမြားထဲ တဈခုအပါအဝငျပါ။ကလေးနို့တိုကျတဲ့အခါ ရငျသားတှလြေော့ရဲသှားမလား? ပိနျရှုံ့သှားမလား? အရငျလိုတငျးရငျးလှပမှုရှိပါတော့မလား? စသဖွငျ့ စိုးကွောကျတတျကွပါတယျ။
ကလေးဖကျကကွညျ့မယျဆိုရငျ မိခငျနို့ရညျသညျသာ အကောငျးဆုံးအာဟာရဖွဈပွီး၊ မိခငျနို့ထကျကောငျးသော အာဟာရပွညျ့ဝသော နို့မှုနျ့ဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။
သဘာဝအလြောကျ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ဖွဈစဉျအရ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျမှာ ရငျသားတှဖှေံ့ထှားလာမယျ၊ မီးဖှားပွီး နို့ခြိုတိုကျကြှေးပွီးခြိနျမှာ ရငျသားအရှယျအစားသေးသှားခွငျး၊ တငျးရငျးမှုမရှိဘဲ လြော့တှဲလာခွငျးမြား ကွုံတှရေ့နိုငျပါတယျ။သို့ပမေယျ ဒါဟာ ကလေးနို့တိုကျခွငျးတဈခုတညျးကွောငျ့ကွုံတှရေ့ခွငျးမဟုတျဘဲ မိမိရဲ့ နထေိုငျစားသောကျမှုပုံစံတှကွေောငျ့လညျး သကျရောကျမှုရှိကွောငျးတှရေ့ပါတယျ။
ဒါဖွငျ့ နို့တိုကျကြှေးပွီးနောကျ ရငျသားတှေ ပုံမပကျြဘဲ တငျးရငျးလှပနအေောငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ?
အောကျဖျောပွပါ ရိုးရှငျးတဲ့ အခကျြလေး (၆) ခကျြကို လိုကျနာခွငျးဖွငျ့ တငျးရငျးလှပတဲ့ ရငျသားတှကေို ထိနျးသိမျးထားနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ :
(1) ကိုယျဝနျဆောငျစဉျနဲ့ နို့တိုကျကြှေးစဉျကာလမြားမှာ သငျ့တငျ့လြောကျပတျတဲ့ အတှငျးခံ (ဘျောလီ၊ဘရာစီယာ)ကို ဝတျပါ။အတှငျးခံလုံးဝမဝတျဘဲ မနသေငျ့ပါ။ အတှငျးခံ ဝတျပါကလညျး မိမိနှငျ့သငျ့လြျောမညျ့ ဆိုဒျ၊ကွိုးအလြော့အတငျး သခြောကနြစှာဝတျဆငျပါ။
(2) ကလေးနို့တိုကျတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျမတျမတျအနအေထားဖွငျ့တိုကျပါ။လိုအပျပါက နို့တိုကျခေါငျးအုံးအသုံးပွုပွီးတိုကျပါ။ ကလေးကိုကုနျး၍နို့တိုကျခွငျးသညျ သငျ့ရငျသားမြားကိုလြော့တှဲစနေိုငျသညျ့ အဓိကအခကျြတဈခကျြဖွဈလို့ပါ။
(3) နို့တိုကျစဉျကာလအတှငျး လမျးလြောကျခွငျး၊ခပျသှကျသှကျပွေးခွငျး၊ရကေူးခွငျး စသညျ့လကေ့ငျြ့ခနျးမြားလုပျခွငျးဖွငျ့ သငျ့ရငျသားမြားဆီသို့သှေးလှညျ့ပတျမှုကောငျးစပွေီး လြော့တှဲခွငျးမှ ကာကှယျပေးပါတယျ။နောကျပိုငျးမှာ ရငျသားတငျးရငျးစမေယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးမြားကိုပါ စနဈတကလြိုကျလုပျနိုငျလြှငျပိုကောကျးပါတယျ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေို Facebook, Youtube တို့မှာ အလှယျတကူရှာကွညျ့ပွီး လိုကျလုပျနိုငျသလို၊ အားကစားခနျးမတှမှောလညျး သှားလုပျနိုငျပါတယျ။
(4) ရခြေိုးသညျ့အခါ သငျ့ရငျသားမြားကို ရခေပျနှေးနှေးဖွငျ့တဈခါ ရအေေးဖွငျ့တဈခါ တဈလှညျ့စီ အသာအယာနှိပျနယျပေးပါ။
(5) အဆီအစိမျ့မြားသော အစားအစာမြားကို ရှောငျနိုငျသမြှရှောငျပွီး အသား၊အသီးအနှံ၊ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား အလေးပေးစားသုံးပါ။
(6) သငျ့ရငျသားမြားကို အစိုဓာတျဖွညျ့ခရငျမျ(Moisturizer) ပုံမှနျလိမျးပေးပါ။
ဒါဟာ မိခင်နို့တိုက်ဖို့ဝန်လေးရတဲ့အကြောင်းရင်းများထဲ တစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ကလေးနို့တိုက်တဲ့အခါ ရင်သားတွေလျော့ရဲသွားမလား? ပိန်ရှုံ့သွားမလား? အရင်လိုတင်းရင်းလှပမှုရှိပါတော့မလား? စသဖြင့် စိုးကြောက်တတ်ကြပါတယ်။
ကလေးဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် မိခင်နို့ရည်သည်သာ အကောင်းဆုံးအာဟာရဖြစ်ပြီး၊ မိခင်နို့ထက်ကောင်းသော အာဟာရပြည့်ဝသော နို့မှုန့်ဆိုတာ မရှိတော့ပါဘူး။
သဘာဝအလျောက် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်မှာ ရင်သားတွေဖွံ့ထွားလာမယ်၊ မီးဖွားပြီး နို့ချိုတိုက်ကျွေးပြီးချိန်မှာ ရင်သားအရွယ်အစားသေးသွားခြင်း၊ တင်းရင်းမှုမရှိဘဲ လျော့တွဲလာခြင်းများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။သို့ပေမယ် ဒါဟာ ကလေးနို့တိုက်ခြင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်ကြုံတွေ့ရခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိရဲ့ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေကြောင့်လည်း သက်ရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
ဒါဖြင့် နို့တိုက်ကျွေးပြီးနောက် ရင်သားတွေ ပုံမပျက်ဘဲ တင်းရင်းလှပနေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
အောက်ဖော်ပြပါ ရိုးရှင်းတဲ့ အချက်လေး (၆) ချက်ကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် တင်းရင်းလှပတဲ့ ရင်သားတွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် :
(1) ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်နဲ့ နို့တိုက်ကျွေးစဉ်ကာလများမှာ သင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့ အတွင်းခံ (ဘော်လီ၊ဘရာစီယာ)ကို ဝတ်ပါ။အတွင်းခံလုံးဝမဝတ်ဘဲ မနေသင့်ပါ။ အတွင်းခံ ဝတ်ပါကလည်း မိမိနှင့်သင့်လျော်မည့် ဆိုဒ်၊ကြိုးအလျော့အတင်း သေချာကျနစွာဝတ်ဆင်ပါ။
(2) ကလေးနို့တိုက်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မတ်မတ်အနေအထားဖြင့်တိုက်ပါ။လိုအပ်ပါက နို့တိုက်ခေါင်းအုံးအသုံးပြုပြီးတိုက်ပါ။ ကလေးကိုကုန်း၍နို့တိုက်ခြင်းသည် သင့်ရင်သားများကိုလျော့တွဲစေနိုင်သည့် အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်လို့ပါ။
(3) နို့တိုက်စဉ်ကာလအတွင်း လမ်းလျောက်ခြင်း၊ခပ်သွက်သွက်ပြေးခြင်း၊ရေကူးခြင်း စသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများလုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်ရင်သားများဆီသို့သွေးလှည့်ပတ်မှုကောင်းစေပြီး လျော့တွဲခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာ ရင်သားတင်းရင်းစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများကိုပါ စနစ်တကျလိုက်လုပ်နိုင်လျှင်ပိုကောက်းပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို Facebook, Youtube တို့မှာ အလွယ်တကူရှာကြည့်ပြီး လိုက်လုပ်နိုင်သလို၊ အားကစားခန်းမတွေမှာလည်း သွားလုပ်နိုင်ပါတယ်။
(4) ရေချိုးသည့်အခါ သင့်ရင်သားများကို ရေခပ်နွေးနွေးဖြင့်တစ်ခါ ရေအေးဖြင့်တစ်ခါ တစ်လှည့်စီ အသာအယာနှိပ်နယ်ပေးပါ။
(5) အဆီအစိမ့်များသော အစားအစာများကို ရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ပြီး အသား၊အသီးအနှံ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အလေးပေးစားသုံးပါ။
(6) သင့်ရင်သားများကို အစိုဓာတ်ဖြည့်ခရင်မ်(Moisturizer) ပုံမှန်လိမ်းပေးပါ။